Imibuzo evame ukubuzwa - Perfect Display Technology Co., Ltd.
Yebo, sidinga yonke imiyalo yamazwe omhlaba ukuthi ibe nobuningi be-oda obuqhubekayo. Uma ufuna ukuthengisa kabusha kodwa ngamanani amancane kakhulu, sincoma ukuthi uhlole iwebhusayithi yethu
Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ukuze ukukhiqizwa ngobuningi, isikhathi phambili izinsuku 20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesithole idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.